Ny Sôtômanera farany momba ny fiara lasa farany dia lasa Soma; Iray amin'ireo valala fanondrahana mahery vaika indrindra eto an-tany, izay efa mionona hatry ny ela ao amin'ny distrikan'i Soma ao Manisa ary mihalevona, no miomana ho fampisehoana ao amin'ny kianjan'ny Istasyon. in Soma [More ...]
Fahadisoana lehibe iray lehibe nataon'ny machinista no voavaha tamin'ny fanatanterahana sy ny tolona nataon'ny Pegawai ny Fitaterana-Sen. Araka ny efa fantatra, ao amin'ny faritra Halkapınar ao İzmir (Depot Halkapınar - Balıkesir, Uşak, Denizli) [More ...]
Teo ambany fitarihan'ny TCDD Transportation Inc. Tale Jeneraly Erol Arıkan sy TÜLOMSAŞ ny Tale Jeneraly Hayri Avcı, ny delegasiona dia nanao fivoriana tao amin'ny TÜLOMSAŞ tao anatin'ny faritry ny fandaharana manavao ny fiaramanidina fiara. Mandritra ny fihaonana dia misy karazana diesel samihafa mandritra ny vanim-potoana 2020-2022 [More ...]
Ny orinasa orinasa Vossloh Locomotive miasa any Kiel dia vita tamin'ny martsa 2018. Vossloh, miaraka amina tranom-borona rehetra novokarina, anisan'izany ny fiara vita amin'ny gony kely sy salantsalany vita amin'ity orinasa ity. [More ...]
Fiaran-dalamby ao Balıkesir tamin'ny volana Mey lasa teo, nanofa tamim-pahanginana tao amin'ny tanànan'i Yunus Emre ao Manisa ary avy eo dia nahatonga fihetseham-po lehibe tamin'ny fiaran-dalamby niverina tany Balikesir. Yunus Emre an'ny fiaran-tany any Balikesir [More ...]
KARAKURT ny tsatoka tiorka voalohany: 4 aprily 1957 Andriamatoa Adnan MENDERES, izay nanatrika ny lanonam-panokafana ny Cement Function any Eskişehir (Çukurhisar) tamin'ny Aprily 5, dia nanome voninahitra ny lalamby ara-panjakana [More ...]
Miverina any Balıkesir ny fisetran-tsambo mahery vaika natolotry ny Tale Jeneralin'ny TCDD mankany amin'ny Kaominikan'i Yunus Emre ao Manisa. Ny solombavambahoaka AK Partista Balikesir Mutlu Aydemir, miaraka amin'ny fanazavany momba ny fiaran-tany nomena an'i Manisa Balikesir taloha kelikely [More ...]
Tale Jeneralin'ny TCDD Ali İhsan Uygun, TÜLOMSAŞ dia nahita fanaraha-maso teo amin'ireo trano. TIBD Jeneraly Jeneraly Ali İhsan Uygun, izay nahazo fampahalalana momba ny famokarana fitaovam-piadiana nasionaly sy lokomotiva avy amin'ny tale jeneralin'ny TÜLOMSAŞ Hayri Avcı, [More ...]
Hiverina any Balıkesir ny alàlan'ny fiakaram-boto amina any amin'ny Kaominikan'i Yunusemre ao Manisa avy amin'ny TCDD General Directorate. Miaraka amin'ny protocol nosoniavina teo amin'ny Tale Dale sy Tale Jeneraly Yunusemre, 2 arivo 557 kilao ary VAT [More ...]